(डेमी मूर बाट पठाईएको)
(१९६२-११-११) नोभेम्बर ११, १९६२ (उमेर ५७)
डेमी मुरको पूरा नाम डेमी गिनेस कुचर हो। टेलिभिजन शृंखला जेनरल हस्पिटलबाट अभिनययात्रा प्रारम्भ गरेकी डेमी से न्ट एल्मोज् फायर -१८८५) बाट हलिउडमा स्थापित नायिकाका रूपमा प्रख्यात भइन्। सन् १९९०मा चलचित्र घोष्टका लागि १ करोड डलर लिएर सबैभन्दा महँगी नायिकाका रूपमा आफूलाई उभ्याइन्। त्यसपछि १ करोड डलर लिएर उनले लगातार अ फ्यु गुड मेन -१९९२), इन्डिसेन्ट प्रपोजल -१ ९९३) एवं डिस्किलोजर -१९९४) जस्ता चलचित्रमा अभिनय गरिन्।
मून लाई टिंग (टी.वी. श्रृंखला) वुमन इन एलीवेटर अन्क्रेडीटेड
नामांकन - "टीवीको लागि निर्मित लघु श्रृंखला या मोशन पिक्चर में एक अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन" 54वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पर
डेमी मुर अप्रिल १ तारिखमा ड्रागन एयरको जहाजबाट काठमाडौं ओर्लंदा साधारण पहिरनमा थिइन्। मुरसँग विश्वप्रशिद्ध समाचार च्यानल सीएनएनका ९ जना पत्रकारको टोली पनि थियो। सीएनएन टेलिभिजनले डेमी मुर र अनुराधा कोइरालाले गरेका कामका विषयमा एक घण्टा लामो डकुमेन्ट्री बनाउने योजनाका साथ त्यो टोलीलाई पठाएको थियो, जसको नाम ‘फ्रिडम प्रोजेक्ट’ राखिएको छ। सन् २०११ भरी विश्वभरिमा हुने महिला बेचबिखनका समाचारलाई प्राथमिकता दिने नीतिअन्तर्गत डेमी मुरलाई त्यसको ब्रान्ड एम्बेस्डर बनाएका कारण पनि डेमी मुरको पहिलो भ्रमणमा नेपाल परेको थियो। अप्रिल २मा द्वारिकाज होटलबाट सिएनएनको पत्रकार टोली र मुर माइती नेपालको परिसर पुगेका थिए। त्यही दिन मुरको टोली माइती नेपालको गोकर्णस्थित एचआईभी संक्रमित महिला तथा बालबालिका पुन:स्थापना गृह पुगेको थियो। नेपालमा पनि व्यवस्थित रूपमा एचआईभी संक्रमित महिला तथा बालबालिकालाई राखिएको देखेर छक्क पर्दै मुरले माइती नेपालको टिमलाई धन्यवाद दिएकी थिईन्। अप्रिल ३मा मुर फेरी गोकर्णस्थित माइती नेपालको पुनःस्थापना केन्द्र पुगिन्। त्यहाँ उनी बालबालिकासँग ‘वटरफ्लाई वटरफ्लाई बीच कलर डु यु लाई क’ गीतमा नाचिन्। अप्रिल ४मा नेपाल-भारत सिमामा बेचिन लागेका चेलीहरू कसरी पत्ता लाग्छन् ? कसरी उनीहरू नेपाल फर्काइन्छन् भन्ने कुराको जानकारी लिन मुर र पत्रकारको टोली भैरहवाको सुनौली पुग्यो। माइती नेपालको सहयोगमा आफ्नो गाउँ फर्कदै गरेकि एक युवतीको साथ रसुवाको राम्चे सम्म पुगेकि डेमी मुर अप्रिल ७मा नेपालबाट फिर्ता भइन।
विकिमिडिया कमन्समा Demi Moore सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=डेमी_मुर&oldid=625500" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०८:५६, २६ नोभेम्बर २०१७ मा परिवर्तन गरिएको थियो।